यूएई-काठमाडौँ २८ वटा उडान तालिका यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यूएई-काठमाडौँ २८ वटा उडान तालिका यस्तो!
admin September 5, 2020 September 5, 2020 समाचार	0
दोहा- संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट काठमाडौँका लागि २८ वटा उडान हुने भएका छन् । आज अर्थात सेप्टेम्बर ५ देखि ३० सम्म हुने नियमित उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको यूएईस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
वन भित्र एकै स्थानमा युवा युवतीकाे शब भेटिएपछि प्रहरी नै चकित…